archana: January 2008
पोल्टिक्स, सुजाता र श्रीमती हिलारी
- छोरी चुनाव कहिले हुने भयो?
:: खोइ अहिले सम्म declare गरेका छैनन् ।
मैले बिदेशमा जानुभएको बुवालाई यसरी ईमेल गरी रहदा चैत्र २८ गते चुनाव हुने भनेर घोषणा भएको अत्तो पत्तो पाएनछु । पछी थाहा पाएर हत्त न पत्त बुवालाई email गरे
:: चुनाव चैत्र २८ गते
फेरी ईमेल आयो चुनाव घोषणा पछी केही त्यस्तो घटना त भएको छैन नि?
:: भयो आमसभा भएको थियो त्यसपछि बसमा बम पड्काए ।
गिरिजा लाइ अहिले कस्तो छ?
मलाइ त खुब हासो पनि उठेर आयो जिवनमै पहिलो पटक मैले आफ्नो बाबुसँग राजनैतीक भालाकुसारी ईमेलबाट गरेकी थिए अरु अरु बेला यसरी गर्दैन थिए ।
:: मैले पनि जवाफ दिदै गए- गिरिजा सञ्चै छ । टि.भी मा देखियो अनी मैले पनि मिडिया कै भाषामा भने आज बिहान नास्ता पनि गरे रे।
के गर्ने बुढो गोरु जस्तो काधमा नेपाललाई बोकेर अगाडि जोतिनु परेको छ । केही गर्लान कि भनेर सबैको आशा छ । फेरी ईमेल आयो ल राम्रो सँग केयर गर्नु बाहिर गएको बेला careful हुनु । बिदेशमा बसेकालाई कस्तो त्राश छ है? हामी त यहाँ बेफिक्री हिड्छौ जती बेला जे भए पनि सहन तयार भएर।
उमेश जि को ब्लगमा पढेको थिए हामी नेपाली गैंडा भैइ सकेका छौ कुन अर्थमा भने नेपालमा अब जती नै मान्छे मरे पनि, जती नै बम पड्के पनि जब सम्म आफु र आफ्ना आफन्तलाइ त्यो घटना नपरेसम्म वास्ता गर्न छोडि सकेका छौ। तेसैले त हामी कती सहजै बम पड्केको कुरा ईमेलमा लेख्ने गर्छौ।
अब अर्को कुरा नेपालमा एउटा महिला सुजाता कोइराला बिना बिभागीय मन्त्री हुँदा नेपाली मिडिया/ब्लगहरुमा भत्तेश्राप गरी रहदा अमेरिकामा एउटा महिला हिलारी क्लिन्टन लाई अमेरिकामा फेब्रुअरी ५ को चुनावमा जिताउन नेपालीको चुरी फुरी देखेर त रमाइलो नै लाग्यो। नेपालमा चैत्र २८ गतेको चुनाव को लागि खासै पोस्टर नदेखे पनि अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुले मस्त ईन्टरनेटमा पोस्टर छापेका रैछन।
हिलारीको गुणगान एकछिन ईन्टरनेटमा पढे पछी सुजाता बिरुद्द सबै पत्र पत्रीकामा पढेर मलाई त अजिब लाग्यो कत्ती को त सुजाता लाई मन नपराउने कुनै कारणनै थिएन सायद सबै मिडियाले उनको राम्रो राम्रो कुरा केलाएर लेखिदिएको भए अहो! सुजाता दङग् परेर अब उप्रान्त राम्रो राम्रो काम गरेर देखाइदिन्थिन कि?
कोही कोही ले त के पनि लेखे भने अब सुजाता मन्त्री भईन अब नेपाली चेलीले पनि उनले जस्तै ६० हजारको चस्मा लाउन सक्ने छन, ३४ हजार को पर्स बोक्नेछन र १ लाख ३४ हजार सम्मको hand bag बोक्न सक्नेछन् रे। :) :)
साचिकै उनले यसरी नेपाली महिलाहरुको जीवन स्तर माथि उठाइ दिइन् भने त नाम अनुसारनै सुजाता हुने थिइन्।
मलाई त असम्भब पनि लाग्दैन यदि उनले चहिन भने अरुले उनलाई के के भन्छन था छैन तर मलाई उनी Bold र कुनै कुरा पनि मनमा नराखी frankly भन्दिने र criticism सुन्न तयार रहने निडर खाल्की जस्ती लाग्छ।
हेरौ, सुजाताले नेपालीको लागि केही गरे पनि नगरे पनि हिलारीले जितिन भने अमेरिकामा बस्ने नेपालीको लागि अवश्य गर्लिन दुबैलाई मेरो शुभकामना।
Posted by archana at 1/27/20085comments:
बत्ती गएको बेला कसरी टाइम पास गर्ने?
३-३ घण्टा सांझमा बत्ती जादा त टाइम पास गर्न बडा मुस्किल हुने रैछ। अब अरु के गर्ने २-३ घर जम्मा भयो आगो ताप्यो अनी गफियो। हुन पनि बत्ती हुन्जेल कसैलाई हाइ हेल्लो गर्ने समेत फुर्सद थिएन। अब लोड्सेडिङले गर्दा साझमा जम्मा भएर गफ हाँक्न मौका पाइएको छ।
उही पोल्टिक्सका कुरा नेताहरु निकम्मा, केही कामका भएनन्, संसदमा गएर सबैलाइ भट्ट्ट्ट् पार्न पर्ने । होइन परार साल पनि लोडसेडिङ भएको थियो एक्कासी ज्ञानेन्द्रको सरकार आएपछी बत्ती बलेको थियो। चाह्यो भने त जसरी पनि बल्दो रैछ नि है? भन्दै एकजना फतफताइ रहेका थिए । त्यसमै अर्की दिदी थप्नु हुन्छ हो! बा! मलाई त गणतन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र जुनसुकै तन्त्र आए पनि आवोस बत्ती बोल्न पर्‍यो, धारामा पानी आउन पर्‍यो र शान्ती सँग बस्न पाइयोस। अरु कुरा मतलब छैन।
कोही भन्दै थिए दिउसो बत्ती गएर हाइ सन्चो छ रे अफिसमा काम थप्प हुन्छ गर्ल्फ्रेन्ड लाई भेट्न गजब भएको छ रे। फेरी अर्काको गफ थियो भारतसँग प्रती युनिट ८ रुपैयामा बिजुली किन्ने रे, अहिले हामीले प्रती युनिट ७ रुपैया ३० पैसा तिरि राखेका छौ अब भारत सँग ८ मा किनेर कत्तीमा बेच्ने हुन्। हा… हा.. हासोको फोहोरा उठ्छ।
यसै गरेर गफिदा गफिदा ९ पनि बज्छ र बत्ती पनि आउछ। मुलुकलाई उभो लाउन थप उर्जा चहिएको बेला आजकालका युवाहरु गफिएरै आफ्नो पनि उर्जा र समय फ्याकि रहेका थिए।
Posted by archana at 1/13/20084comments:
गूगलले साच्चै पैसा पठाउछ
- गूगलले साच्चै पैसा पठाउछ र?
- त्यस्को चेक त जम्मा हुँदैन भन्छन नि, bounce हुन्छ रे नि ।
- गुगलले कसरी पैसा पठाउछ ह?
- गूगलले पैसा पठाउछ भन्छन नि, के यो साचो हो?
- घरमै बसी बसी गूगलबाट पैसा कमाउन सकिन्छ रे नि , लौन कसरी हो, मलाई पनि सिकाइदिनु न।
गूगलको चेक/पैसाका बारेमा मलाई यिनै प्रश्नहरु सोधिन्छ र अहिले सम्म मलाई धेरै जनाले सोधिसके । हो, मलाई पनि केही महिना अघिसम्म पनि माथिको प्रश्न मनमा आइ रहन्थ्यो तर जब आफ्नै हातमा चेक पर्‍यो त्यस पछी पूर्ण विश्वाश भयो कि ए!! साच्चै गूगलले चेक पठाउदो रैछ। यस्को लागि तपाईंले चाँही अलिकती मिहेनत गर्न पर्छ है जस्तै:
१) http://google.com/adsense/ मा गएर खाता खोल्ने । यो सितैमा खोल्न पाईन्छ ।
२) त्यसमा सही पत्रचार ठेगाना राख्ने पछी तपाईंलाई त्यही ठेगानामा Pin Code र Cheque पठाउछ ।
३)खाता खोली सके पछी तपाईंको information verify गरेर तपाईंको खाता गूगलले activate गर्दिन्छ।
४) त्यस पछी गूगलका खाता भित्र रहेका बिभिन्न size का advertisement का कोड आफ्नो website/blog मा राख्नु पर्छ।
५) website/blog मा राखेको advertisement जती चोटि click हुन्छ त्यसैको
हिसाबले खातामा पैसा जम्मा हुँदै जान्छ तर यो चाँही भिन्दै भिन्दै IP बाट हुन पर्छ ए उटै IP बाट धेरै click भयो भने खाता block हुन्छ। यो सम्बन्धी डिटेल जानकारी तलको लिन्कमा छ।
google detects invalid click
६)तपाईंको खातामा केही रकम जम्मा भए पछी तपाईंको पत्राचार ठेगानामा Pincode पठाउछ। त्यो कोडबाट आफ्नो खातामा पैसा कती जम्मा भयो, कहिले चेक पठाउनको लागि request गर्ने आदी option भेटिन्छ।
Google pincode sample
७) गूगलले चेक कम्तिमा $100 जम्मा भए पछी पठाउछ र अली धेरै जम्मा गरेर एकै चोटि पठाइदिन अनुरोध गर्न पनि सकिन्छ।
८) $100 पुगेपछी तपाईंको request अनुसार तपाईंको नाममा City Bank NY को चेक पोस्ट बक्समा आइपुग्छ त्यो Cheque A/C Pay हुन्छ त्यसैले तपाईंको आफ्नो अफिस अथवा आफ्नो नाम दिदा बैंकमा भएको नाम अनुसार दिनु पर्ने हुन्छ।
Google Cheque Sample
९) चेक १५-३० दिन भित्र तपाईंको बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ।
काठमाडौं पनि थुप्रै कम्पनीहरु खोलेका छन जस्ले google ads/online द्वारा कसरी पैसा कमाउने भन्ने सिकाउछन् । कोही कोही कम्पनिले चाँही घरमै बसी बसी (home based online business) पैसा कमाउन सिकाइदिन्छु भनेर मस्त पहिलेनै आँफै पैसा कुम्लाउने रैछन् त्यसैले त्यस्ता कम्पनिको मद्घत लिन अगाडि होसियार चाँही हुन पर्छ है नत्र भने समय र पैसाको बर्बादि हुन्छ।
मैले थाहा पाए सम्म कोही कोही नेपालीले Google Adsense बाट (Monthly $3000-$6000) सम्मको चेक पाउने गरेका छन् अब त्यो कस्ले भनेर पत्ता लगाउने काम चाँही तपाईंहरुको।
पैसा कमाउन त सजिलो हुँदैन । बुद्दी र मिहेनत त अवश्य चाहिन्छ । यदी google adsense मा मिहेनत र बुद्दी लगाउनु भयो भने तपाईंलाई ढुक्क हुनु होस् चेक अवश्य आउछ।
Posted by archana at 1/08/2008 38 comments: